China Single Shaft Shredder Ukwakha futhi Factory | Jiarui
I-Single Shaft Shredder idonsa ubuchwepheshe obuthuthukisiwe basekhaya nabangaphandle; unomklamo onengqondo nokuhlolwa okuphindaphindiwe futhi uqhubeka nokuthuthuka.Umshini unezici ezithile njengokusebenzisa amandla okuphansi, ikhwalithi enhle.
I-shaft shredder eyodwa yakhiwa yimoto, isinciphisi sendawo esinamazinyo anzima, umugqa wommese ojikelezayo, ummese ohambayo ongenisiwe, ummese omisiwe, ifreyimu, isisekelo somshini, ibhokisi, isilinda se-hydraulic, ipompo kawoyela, isilinda , ipulatifomu yokusebenza nezinye izakhiwo ezinkulu.
Kufakwe ummese ohleliwe ohlakeni, bese kufakwa ummese wokuhambisa oshumekekayo ongashumeka ku-rotary knife shaft. Isibalo sommese osuswayo siya ngezinhlobo ezahlukahlukene nosayizi weshafu wommese ojikelezayo. Shintsha i-engeli kuze kube yilapho izinhlangothi zingacacile bese ulola ummese. Ngoba uhlobo uzipho ezihambayo ummese futhi ukusika rotary, futhi ummese fixed kanye nommese ezihambayo amazwe ekhethekile ingxubevange steel ezenziwe ,, ngakho impilo service lide. Ikhono lokusika eliqinile, amandla aphezulu okukhiqiza, ukusetshenziswa okujwayelekile kuze kufike kumathani ayi-1000-1200 noma ngaphezulu kwesidingo sokucija.
Lapho i-shredder isebenza, izinto zithuthukiswa ngamasilinda wokubacindezela futhi zihlonyiswe ngamadivayisi okubopha. Sebenzisa uhlelo lokulawula uhlelo lwe-Nokia, olungalawulwa ngokuzenzakalela. Inokuqala, ukuma, ukuhlehlisa kanye nokulayisha ngokweqile imisebenzi yokulawula okuzenzakalelayo. Inezici zejubane eliphansi, i-torque enkulu nomsindo ophansi.
I-shaft shredder eyodwa isetshenziselwa ukuphinda isetshenziswe kabusha ipulasitiki, iphepha, ukhuni, i-fiber, ikhebula, irabha, okokusebenza kwasendlini, insimbi elula, imfucumfucu kamasipala eqinile, njll. Ifanelekile ukunciphisa izinto ezahlukahlukene ezahlukahlukene: Uphethiloli owenziwe ngodoti : utshani, imfucuza eqinile kamasipala; Izindwangu: indwangu yefayibha, inayiloni; Iphepha: iphepha lephepha lezimboni, iphepha lokupakisha, iphepha lekhadibhodi; Izintambo zekhebula: ikhebula lomgogodla wethusi, ikhebula le-aluminium, izintambo ezihlanganisiwe; Ipayipi le-Polypropylene, ukufakwa kwezimboni namafilimu epulasitiki, i-PP ephothiwe izikhwama; Ipulasitiki: i-plastic block, amashidi epulasitiki, ibhodlela le-PET, ipayipi lepulasitiki, isitsha sepulasitiki, izigubhu zepulasitiki.
Amapharamitha we-Shaft Single Shredder
Isilinda Stroke （mm）
Umfutholuketshezi Amandla Amandla （KW）
Langaphambilini I-WSP Series Crusher
Olandelayo: Swing shredder yengalo
Umugqa we-PP PE Film Washing wokusebenzisa kabusha